Imigomo Yokusebenzisa | Accounts
Home Imigomo Yokusebenzisa
Lokhu Imigomo yokusetshenziswa siyasebenza Okthoba 1, 2011.
ngokusebenzisa www.Iroy.in (le "Imigomo"), iwebhusayithi (kufaka, ngaphandle komkhawulo, yimuphi amawebhusayithi ahlobene, izinkundla noma amabhulogi, imeyili kanye RSS feeds uyavumelana ukuboshezelwaImibandela Imigomo Yokusebenzisa elandelayo ("imigomo").
Le migomo elawula kuphela izinto ishicilelwe kanye / noma basakaza on the Iroy.in (kufaka, kodwa kungagcini izihloko, izithombe, imifanekiso, amakhodi umthombo nomenziwa, njll) ("Okuqukethwe") ezihlobene Site futhi ungambozi iyiphi enye ingosi ye exhumene noma ebaluliwe ephathelene ne-Site, ngaphandle uma kushiwo.
Iroy.in iyaligodla ilungelo guqula lezi Terms ngezikhathi ezithile ngaphandle kwesaziso, nganoma yisiphi isizathu ngokuzikhethela Iroy.in yodwa. Iroy.in ukuthumela noma ukubonisa izaziso izinguquko ezibalulekile kwi Iroy.in Amasayithi kanye / noma i-imeyili kuwe mayelana nalezi zinguquko.
Ngomusa ubuyekeze migomo ngezikhathi ezithile ukuze uzobe azisiwe yiziphi izinguquko. Ngokusebenzisa Iroy.in Amasayithi, uyaqonda, avume futhi uyavuma ukuthi ngeke alalele futhi baboshwe migomo.
Okuqukethwe evele Iroy.in Amasayithi senzelwe siqu sakho, ukusetshenziswa ezingezona ezentengiselwano kuphela. Ukusetshenziswa Commercial yanoma yiziphi Okuqukethwe Iroy.in Amasayithi akuvumelekile, ngaphandle uma kubekwe ngenye kule Imigomo.
Awuvumelekile ukuthi ukopishe, guqula, ukushicilela, ukudlulisa, guqula lokhu akubhalayo nakwethulayo, iqhaza ukudluliswa noma ukuthengiswa, ukukhiqiza kabusha, ukudala imisebenzi emisha evela, ukusabalalisa, ukwenza, isibonisi, noma nganoma iyiphi indlela axhaphaze, yimiphi Okuqukethwe liphelele noma liyingxenye, ngaphandle kwemvume ebhaliwe Iroy.in noma umnikazi we-copyright zikhonjwe isaziso se-copyright okuqukethwe, ngaphandle kushiwo kule Imigomo.
Iroy.in Amasayithi ukwenza kokuqukethwe yayo kuyatholakala ngaphansi Creative Commons Attribution Ayithengisi, zokugaya okungezona zokuhweba kanye ukutuswa Site. Lesi sigunyazo evumela umuntu nokuzala, remix, noma ngenye indlela ukushintsha yasekuqaleni kokuqukethwe Iroy.in Amasayithi 'hushazela njengoba credit kunikezwa Site.
Lokhu kuhlanganisa, ngokuqondile, imvume:
Ukuze bakhiqize ecaphuna Iroy.in Amasayithi;
Ukuze bakhiqize-skrini kwanoma iliphi ikhasi le-Iroy.in Amasayithi;
Ukuze zihlanganisa yasekuqaleni Iroy.in okuqukethwe e impahla-movie, TV, ukuphrinta, inthanethi, njll
Okuqukethwe okuvikelwe kwe-copyright ngokufana Nigeria kanye nemithetho ye-copyright International, futhi ziphethwe noma elawulwa yiyo Iroy.in noma iqembu uyasho njengoba umhlinzeki wokuqukethwe.
Iroy.in inika elinganiselwe, revocable, non-komunye, elingadluliselwa nelinganikezelwa futhi akukhethekile ilayisensi uphinde usebenzise kokuqukethwe kuncike yayo nemigomo yalesi sivumelwano.
Iroy.in Amasayithi ukwenza kokuqukethwe yayo etholakalayo ukuthengiswa noma nge-web, mobile kanye / noma ukuphrinta. Lesi sigunyazo zokuthengiswa kokuqukethwe evumela umuntu ukuba uphinde usebenzise kokuqukethwe original Iroy.in Amasayithi ekukhokhela ilayisensi, ngaphandle ukuma kokuqukethwe kanye hushazela njengoba credit kunikezwa Site.
Ngaphandle kushiwo kule Imigomo, akumelwe ukususa nezixhumanisi zangaphakathi ku okuqukethwe Iroy.in Amasayithi '. I-logo Imigomo kanye / noma i-URL kufanele avele ekhasini ngalinye ukubonisa okuQukethwe Site. Akumelwe guqula ifomethi noma lomnini sematheni, umbhalo kanye neminye imininingwane enikeziwe in the RSS izifunzo. Akumelwe ukususa "Okuningi Kusukela [igama site]"Links emuva Imigomo yokuqala ekupheleni ngakun.
Ilayisensi kokuqukethwe zokuthengiswa akukuniki yimuphi ubunikazi, noma yimuphi omunye empahla nentshisekelo, yimuphi kokuqukethwe, futhi kungamiswa noma kunqanyulwe isivumelwane nabo nganoma yisiphi isizathu, ngokuzikhethela Iroy.in yodwa, futhi ngaphandle kwesaziso kusengaphambili noma icala.
Iroy.in umangalela imali ilayisensi ukusetshenziswa kwezentengiselwano kokuqukethwe yayo nge kuwebhu. mobile kanye / noma ukuphrinta. Ngokubhalisa njengendlela ukuthengiswa umlingani sokuqukethwe, uyavumelana kuhambisane nemigomo yalesigaba yesivumelwano.
Ungase unikeze isaziso electronic isithakazelo ube zokuthengiswa umlingani Okuqukethwe yimiphi Iroy.in Amasayithi ngokuthumela i-imeyili ask@iroy.in
Wena ubuye uvume ukukhokha Iroy.in izimali layisensi isikhathi syndicating kokuqukethwe Iroy.in Amasayithi 'yakho. Zonke izimali zelayisensi zikhokhelwa kusengaphambili futhi imali engeke ibuye ekhokhelwa. Iroy.in ngokucacile igodla ilungelo lokushintsha Izimali zelayisensi nganoma isiphi isikhathi, phezu isaziso kuwe.
RSS noma komphakeli wokuqukethwe
Iroy.in Amasayithi inikeze RSS feed ngayinye Imigomo Iroy.in. Uma usebenzisa zonke noma kakhulu yonke okuphakelayo kwekhasi, sicela ukuthi awazi uyishintshe nganoma iyiphi indlela, kuhlanganise bula aphume izikhangiso futhi alalele iziqondiso ezilandelayo:
izifunzo ezisekelwa Okugcwele enzelwe kuphela ngokusetshenziswa komuntu RSS abafundi.
Ukuze zonke ezinye ukusetshenziswa okuphakelayo, kuhlanganise ukukhiqizwa kabusha kumawebhusayithi, kufanele usebenzise izifunzo ngcaphuno kuphela, ngaphandle kwesimo lapho kuvunyelwana ngokunye nge Iroy.in.
Akumelwe ninezele okuqukethwe, kubandakanya noma iyiphi izikhangiso noma okunye okuqukethwe yokukhangisa, ukuze RSS izifunzo.
Iroy.in iyaligodla ilungelo uphikisana isethulo sakho se-RSS feeds bese ilungelo zidinga ukuthi kuphele usebenzisa RSS feeds nganoma isiphi isikhathi.
Iroy.in okwengeziwe iyaligodla ilungelo anqamule nokusakazwa kwayo we-RSS feeds noma ushintshe okuqukethwe noma ukufometha RSS feeds nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso kuwe.
Okukhiqizwa umsebenzisi okuqukethwe
Iroy.in ngeke ukwamukela umthwalo okuqukethwe amazwana umsebenzisi. Wena wedwa onesibophezelo sanoma ukuxhumana kwakho kwi Iroy.in Amasayithi. Nokho, uyavumelana yini ukuthi lenze yiloba yikuphi okulandelayo:
Ungathumeli okusongela, ukuhlukumeza, isithunzi, noma impahla libelous.
Musa ngenhloso yokwenza izitatimende noma esidukisayo.
Unganikezi ukuthengisa noma ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo noma isevisi.
Ungathumeli impahla ukuthi iphula i-copyright noma yimuphi omunye isithakazelo empahla.
Ungathumeli imininingwane ukuthi wazi ukuba oluyimfihlo noma ulwazi olubucayi noma ngenye esephule umthetho.
Sicela uqaphele ukuthi uma ngibhale kunoma Amasayithi Iroy.in, kuba yingxenye yengxoxo yomphakathi. Kasisusi amazwana yomsebenzisi ngaphandle thina sibona kubo ukuba kwemigomo yethu yokusetshenziswa.
Uma umuntu wesithathu ekhononda ukuthi amazwana wakho okuphula imigomo nemibandela yethu noma amalungelo abo, sizobe ubameme ukuphendula kule imibono ngokwabo.
Uma bephishekela isikhalazo, siyokwenza okusemandleni ukuxhumana nawe nge izindlela uye wasinika, ukukuxwayisa isimo. Sizokwenza ukuvikela imininingwane yakho yokuxhumana, kodwa kungenzeka ukuba baphoqeleka ukuba vula phezu ngokufana inqubo yezomthetho.
Okwesithathu-Party Amawebhusayithi sokuqukethwe
Iroy.in Amasayithi ingaqukatha izixhumanisi zangaphandle ukuze amawebhusayithi third-party. Iroy.in akuyena obangela ukunemba, ukutholakala noma ukuthembeka yiluphi ulwazi, izimpahla, idatha, imicabango yabantu, iseluleko noma izitatimende ezenziwe etholakalayo kumawebhusayithi third-party.
Izivakashi Iroy.in Amasayithi Uyabophezeleka ephelele futhi ingozi ekusebenziseni kwabo yimuphi amawebhusayithi third-party. Izivakashi kufanele iqondise nanoma yikuphi ukukhathazeka maqondana nanoma yimuphi isixhumanisi sangaphandle nomqondisi website third-party noma umphathi wewebhusayithi.
Le Site inikwe ilayisense ngaphansi Creative Commons Qaphela Umnikazi-Ungayisebenziseli Ezentengiselwano 3.0 Ilayisensi Unported.